Ailika ny mpifaninana atahorana | NewsMada
Ailika ny mpifaninana atahorana
Par Taratra sur 20/04/2018
Araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena, firenena anisany « mahantra indrindra maneran-tany » i Madagasikara. Fomba fitenin’ny filoha teo aloha Ratsiraka ny hoe :”foin’ny Zanahary ho Nosy i Madagasikara”, azo adika fa maro tsy hita pesimpesenina ny harena voajanahary ao aminy. Tsy vaovao fa efa fantatry ny rehetra ary voizina amin’izao fotoana izao hoe “firenena miaina eo ambonin’ny harena voajanahary nefa miaina anaty fahantrana lalina ny mponina ao aminy i Madagasikara”. Tsotra ny tian-kambara. Mora ny mikabary sy ny fahaiza- miteny, ny mandresy lahatra, sady akaiky rahateo ny fifidianana, raha tena vonona hanao izany tokoa ny fitondrana ka hanatanteraka ny “fifidianana mangarahara, tsy ankanavaka ary eken’ny rehetra”. Aoka ho fantany anefa fa ny vondrona iraisam-pirenena no mamatsy vola ny hanaovana io fifidianana io raha tsy sanatria misy ny tsikomban’ireto farany aminy na minia tsy mahita ny zava-misy amin’izao toe-draharaha mafana izao.
Marina fa misy ny lalàna, saingy fantatra hatramin’izay ny nataon’ny mpitondra nifandimby io “lalàna” io hifanaraka amin’ny filàny sy ny mahamety azy. Hany ka “ailika” ny “mpifaninana atahorany”, amin’ny filalaovana ny lalàna. Tsy zava-baovao izany fa iaraha- mahita ny zava- misy ataon’ny mpitondra izao, ka ampiasaina avokoa ny fitaovana eo am-pelatanana, hamotehana ny fikarohan’ny Malagasy maro anisa fiainana tsara kokoa.
Ekena fa tsy mankasitraka ny korontana ny Malagasy tsimandadiharona. Tsy misy manana tombontsoa amin’ny fandrobana, ny krizy sakafo, ny fikatonan’ny orinasa, saingy raha jerena ny lasa, ataon’ny mpanao politika fitaovana ireny rehetra ireny, hampikorontana ny fiarahamonina.
Mitanisa andinin-dalàna amin’ny fanajana ny fandriampahalemana ny mpitondra, fa lalàna na andininy aiza no hanamarinany fa tsy zon’ny vahoaka ny mitaky ny rariny? Miezaka manaraka ny lalàna ireo depiote hitatitra ny zava-misy any amin’ny mpifidy azy, saingy sakanana. Fikatsahana ny fandrosoana izany, fa fihemorana indray ny ankoatra izany.